Hlola i-Auckland, New Zealand - World Tourism Portal
Hlola i-Auckland, New Zealand
Yini ongayibona e-Auckland, eNew Zealand. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili e-Auckland, New Zealand.
Yini okufanele uyenze e-Auckland, New Zealand
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha e-Auckland, New Zealand
Bukela ividiyo nge-Auckland, New Zealand
Hlola i-Auckland; indawo enkulu kakhulu yedolobha I-Polynesia futhi E-New Zealand, nesibalo sabantu abayizigidi ze-1.45. Kusengxenyeni esenyakatho yeNyakatho yesiqhingi, esiqeshini sendawo emincane esihlangana nenhlonhlo yeNorthland kuya kusiyingi seNorth Island.
I-Auckland idolobha lesimanje elinendawo yonke futhi cishe ingxenye eyodwa kwezintathu E-New Zealand's sonke sabantu sihlala e-Auckland.
Idolobha namadolobha asethuthukile ngaphakathi kohlaka lwesikhathi esifanayo namaphethini afanayo asedolobheni afana neCalifornia (e-Los Angeles futhi i-Auckland ihlanganyele ukwakhiwa kwamadolobha okuhlela futhi kungamadolobha odade). Namuhla leli dolobha namaphethelo amadolobha ahlangana ngaphezulu kwendawo enkulu yasemadolobheni, ebheke empumalanga nasentshonalanga ngamatheku amakhulu amakhulu (i-Waitemata neManukau) nolwandle (i-Pacific Ocean neTasman Sea) ngaphesheya.
Amadolobhana amaningi ayekade engamadolobha ahlukene futhi anikeza izibonelo zokuhlala kwasekuqaleni kwaseYurophu (Mission Bay, Parnell Village kanye nePonsonby yizindawo ezingumlando ezingamadolobha ahlala zigcinwe kahle futhi aqukethe izibonelo ezinhle zezitayela zokuhlala zaseVictorian, zikaEdward naseDeco.
Indawo yase-Auckland yaqala yaxazululwa ukuhlangana kwabantu baseMāori bezizwe ezahlukahlukene ngaphezu kwe-700 edlule. Ukusuka ku-1600 kuya ku-1750 izizwe zakwaTāmaki zathusa izigaxa zentaba-mlilo, zakha i-pā (izindawo zokuhlala ngemuva kwezivikelo ezivikelekile). Ngaphesheya kwesiqubulo abasungule amahektha we-2,000 wezingadi ze-kūmara (amazambane amnandi). Lezi zinto zasemhlabeni zibonakala kalula eMt Edeni - intaba-mlilo etholakala kalula ukusuka e-CBD.
Ukubhalwa kwesibhakabhaka sasemkhathini kwe-CBD yi-Sky tower - indawo yokubuka, indawo yokudlela kanye nokuxhumana ngocingo eqediwe e1997 Ungu-328m mude, njengoba kukalwa kusuka ezingeni lomhlaba kuye phezulu kwesixhaxha, okwenza kube yisakhiwo esikhululekile esikhulu kunazo zonke eNyakatho Nenkabazwe.
I-Auckland ivame ukubizwa ngokuthi “Idolobha Lamaseyili"Ngenani elikhulu lamachichi athinta i-Waitemata Harbour neHauraki Gulf. Kungaziwa nangokuthi “Idolobha Lezintaba-mlilo Eziqothulayo“. Iningi lobunjalo bayo bemvelo livela eqinisweni lokuthi lakhiwa e-Auckland Volcanic Field equkethe cishe izintaba-mlilo ze-48. Zonke izintaba-mlilo ziqothuliwe ngawodwana kepha insimu yezintaba-mlilo iyonke ayinjalo.
I-Auckland idolobha elikhulu kunawo I-Polynesia. Kwamanye amazwe aseziqhingini zasePolynesia kunabafuduki abaningi abahlala e-Auckland kunasemazweni akubo. Ukuhlanganiswa kwamasiko acebile ePacific kugujwa emikhosini nasemidlalweni yemidlalo.
I-Auckland isendaweni efudumele yesimo sezulu futhi ayizwelani nezimo ezishisayo noma ezibandayo nganoma yisiphi isikhathi sonyaka. Izinyanga zasehlobo zinguDisemba kuya kuMashi. Ilanga liqine kakhulu ngalesi sikhathi futhi kungakuhle ukuthi usebenzise i-sunscreen futhi uvikele isikhumba ekuvezweni okuhlala isikhathi eside. Ngo-Ephreli kuya kuJuni kuletha amazinga okushisa apholile nemvula ngasekupheleni kukaJuni okuqhubeka ebusika kuze kube uSepthemba no-Okthoba. I-Westerly yezindiza ihamba phambili unyaka wonke futhi kunezihibe eziphakeme ngezikhathi ezithile ezivela kumlilo wehlobo ehlobo e Australia; ukwenza ukukhanya kwelanga.
I-Auckland inesikhumulo sezindiza sayo sakwamanye amazwe.
Kunezindlela ezahlukahlukene zokuhamba lapho kufaka phakathi ibhasi, isitimela, isikebhe, itekisi, isivalo nokuqasha imoto yakho.
I-Auckland Art Gallery Toi o Tāmaki, uCnr Kitchener kanye ne-Wellesley Street. I-Daily 10: I-00-17: 00, ngaphandle koSuku lukaKhisimusi. Iqoqo elinwetshiwe kakhulu lobuciko bukazwelonke nabamazwe omhlaba eNew Zealand, lihlala esakhiweni esiyingqayizivele somklomelo emaphethelweni we-Albert Park enhliziyweni yedolobha. Inesitolo nekhefi. Igalari lihlala livakashela imibukiso yamanye amazwe futhi linikezela ikhalenda yezinkulumo, imisebenzi, ukuhlolwa kwefilimu nemisebenzi yezingane ukufeza uhlelo lwayo lombukiso. Izindleko zokwamukelwa zisebenza kubavakashi bamazwe aphesheya. Amacala angasebenza kwimibukiso ekhethekile.
I-Auckland War Memorial Museum, Museum Circuit, Parnell. I-10: 00-17: 00. Ibonisa amaqoqo wokubaluleka okukhulu futhi inikezela ukubukwa okuhle kwe-Waitemata Harbour neziqhingi zeHauraki Gulf kusuka esikhundleni esivelele e-Auckland Domain. Yakhiwa kuma-1920s njengesikhumbuzo sempi kulabo abalwa futhi bafa empini. I-cenotaph ezisekelweni ezingezansi kwezinyathelo zokungena emnyuziyamu yindawo okugxilwe kuyo ngemisebenzi yokukhumbula usuku ye-ANZAC minyaka yonke. Isitezi esiphakeme siqopha amagama asezitsheni kanye namathuna ashubile nezinhlu zemicimbi yempi nezindawo zazo. Imnyuziyamu iqukethe imibukiso emihle kakhulu yobuciko beMāori nobunye ubuciko bezinto zabantu basePolynesia kanye nemidlalo yansuku zonke yokusebenza kwamasiko amaMāori (phansi komhlaba) kanye ne-geography yesifunda sase-Auckland. Kukhona i-cafe.
Indawo ebaluleke ngokomlando ebusika engadini ebaluleke kakhulu futhi ikufanelekela ukuhamba okufushane ukusuka eMnyuziyamu ukubona ukuhlaba umxhwele kombhede wezimbali, izitshalo zasezindaweni ezishisayo nezifanekiso (ezikhululekile).
Ipaki elidala kakhulu lase-Auckland Domainis Auckland futhi liba nemicimbi yezemidlalo yangempelasonto.
I-New Zealand National Maritime Museum, i-Cnr Quay ne-Hobson St, i-Viaduct Harbour. Imibukiso ethokozisayo yomlando wezasolwandle waseNew Zealand.
I-Sky tower, i-Cnr Victoria ne-Federal St Kwa-328 m, lesi yisona sakhiwo esikhululekile esikhululekile samahhala eNyakatho Nenkabazwe, esinikeza ukubukwa okufika kude kwe-80 km kude nokudla okuhle endaweni yokudlela yase-Orbit evumayo.
I-Auckland Zoo, i-Motion Rd, i-Western Springs. I-09.30-17.30 (ukuvunyelwa kokugcina 16.15), ivaliwe i-25 Dec. Iqoqo elikhulu kunawo wonke lezilwane zomdabu nezangaphandle e-New Zealand, ehektareni le-17 lama parkland aluhlaza, imizuzu ukusuka enkabeni ye-Auckland.
I-StarDome Observatoryon imithambeka ye-One Tree Hill. Lesi siqiwi siqukethe nezindawo zemivubukulo yaseMāori, indawo yokudlala yezingane nepulazi elisebenzayo.
I-Kelly Tarlton'son ebabazekayo iTamaki Drayivu kanye nekhaya le-Antarctic Encounter ne-Underwater World. Kuyinto i-aquarium ebandakanya uhambo ngokusebenzisa umhubhe osobala ngenkathi izinhlanzi kanye noshaka zibhukuda ngakuzungezile, namathangi emisebe enezinkulumo zesikhathi sokudla.
I-MOTAT (iMnyuziyamu WezokuThutha nezobuChwepheshe), iGreat North Rd, iWestern Springs, eduze neZoo. Imnyuziyamu esebenzisana nezinto ezingaphezu kwe-300,000. Bheka i-WW 2 Avro Lancaster Bomber ne-Solent Flying Boat e-Sir Keith Park Memorial Aviation Collection.
I-Auckland izungezwe imvelo, okuningi kwayo kukhululekile ukukujabulela.
Shayela noma udabule enye yamakhompiyutha amaningi e-Auckland aqhuma ngentaba-mlilo njenge-One Tree Hill noma iMount Edin ukuze ubone ukubukwa komhlaba onamandla wedolobha, nokubona izimvu nezinkomo endaweni enkulu yedolobha!
Bona ukuthi yini ehleli endaweni yezokuzijabulisa yedolobha i-Aotea Center, i-Auckland Town Hall kanye neCivic Theatre (nengaphakathi layo libuyiselwe esimeni esihle). AmaCinemas aseduzane weSky City anikela ngama-movie wakamuva akhululiwe ku-world class multiplex. Izikhungo ezinkulu zasedolobheni nazo zinendawo yama-cinema amaningi - okuphawuleka kakhulu yile iSylvia Park enezinketho zokubuka ama-movie okunethezeka kanye nesinye sezikrini ezinkulu kakhulu ze-35mm projector. ISylvia Park ifinyeleleka kalula ngemoto.
Bamba umdlalo we-cricketor rugby enkundleni yezemidlalo enkulu kunazo zonke e-Edene Park.
Khwela i-Auckland Harbour Bridge.
Yenza i-Sky Jump, ikhebula elilawulwa ngentambo ligxume kusuka kubude be-192m ku-Sky tower. Noma zama i-Sky Walk, ukuhamba ngezinyawo nge-1.2m ububanzi bude be-92m ngenhla komhlaba ngaphandle kwezitimela zesandla.
Thatha isikebhe ukusuka ezansi kwesiqhingi sentaba-mlilo iRangitoto esime ngokugqamile eduze komnyango Wethekukazi i-Waitemata. Khuphukela engqungqutheleni ukuze ubuke okumnandi ngetheku nedolobha lase-Auckland. Thatha ipiki noma ubhukuda.
Qasha izikebhe noma ibhayisekili e-Okahu Bay bese uthatha i-skatealong Tamaki Drive ebabazekayo. Hlanganisa ngokuvakasha kweKelly Tarltons naseMishini Bay.
Hlola i-NZ, i-Viaduct Harbour Basin. Isikebhe sokuhamba ngesikebhe sase-Waitemata sihamba ngesikebhe esikebheni esivela Ukuziqhenya kwe-Auckland Futhi unikeze ihora le-2 Isipiliyoni Saseyilikwi-yacht yaseMelika yaseMelika noma i-safari eyindilinga yamandla amakhulu ukubona imikhomo namahlengethwa eHauraki Gulf Marine Park.
I-Auckland Sea Kayaks. I-kayak yolwandle kwesinye seziqhingi zezintaba-mlilo zase-Auckland njengesiqhingi saseRangitoto imini nobusuku.
Iya olwandle. I-Mission Baycombines chic yase-emadolobheni nge-beach (ku-Tamaki Drayivu iya phambili ukusuka ku-Kelly Tarltons).
Ukusuka ezifundeni zemfashini kuya ezimakethe zezimbaza, izitolo zoMnyango ukuya ezitolo ezinkulu nasemapaki ezitolo - ukuyothenga kuwumsebenzi wokuzijabulisa we-Aucklanders njengoba ubukele ukuthengiswa kwakamuva (ukukhushulwa kwesaphulelo) kuwumdlalo - abathengisi abakhulu bajabule kakhulu ukunqabela - ukuthengiswa okukhangiswe kabanzi nokunikezwa kumenyezelwa nsuku zonke. Ukuncintisana kugcina izintengo zinengqondo - yize izintengo ezinkulu (zokudla) zibiza kakhulu uma ziqhathaniswa namanye amazwe aseYurophu.
Ama-ATM okukhishwa kwemali maningi ezindaweni eziphezulu zabahamba ngezinyawo nasezitolo ezinkulu.
Izitolo eziningi nezitolo ezinkulu zamukela isikweletu.
Amagatsha asebhange akhombisa ngokuvelele amanani wokushintshana wamanje futhi amaningi anewindi lemali elikhethekile. Kukhona nabasebenza ngokushintshana ngamadokodo ezindaweni zabavakashi. Ezinye izivakashi noma izitolo eziyisikhumbuzo zingashintshana ngemali yakwamanye amazwe ukuthenga (ngokuvamile ngamanani aphansi) - uma kungenjalo, ukwethula noma yini ngaphandle kwe- $ NZ kuzokuthola ukubuka okungekho.
Indawo engaphansi kwedolobha ye-CBD inezitolo eziningi eziyisikhumbuzo zohla lwezabelomali eziningi. Bheka uzungeze umgwaqo ophansi we-Queen Street kanye nendawo ephansi ye-Albert Street. Futhi i-DFS Galleria ekhoneni eliphansi le-Albert Street neCustoms Street West.
IHobson Street (ekugcineni phezulu) inezitolo ezimbalwa ezinkulu futhi ezithumela imikhiqizo yezinyosi nemikhiqizo yezempilo.
I-Auckland Museum inezitolo ezinezitolo eziningi njengoba kwenza i-Zoo. Isikhumulo sezindiza sinezinto eziyisikhumbuzo kokubili ngaphambi nangemva kokufika.
Indawo ephezulu yomgwaqo / i-Vulcan Lane / O'Connell Street iyisikhungo sezemfashini i-Auckland Central futhi inezitolo zomklami wendawo kanye nemikhiqizo yaphesheya. Bheka abesifazane abagqoke amaRuby, Moochi, Ricochet, Karen Walker kanye ne-Agatha Paris French Fashion jewelry kanye neminye imikhiqizo eminingi yaphesheya.
Ngokuthola ama-menswear, vakashela uMfoweth 'omncane, amaCrane Brothers, kanye neWorld Man. Okwe-New Zealand nemikhiqizo yamazwe omhlaba ekugqokeni kwabesilisa nabesifazane, bheka iWorkshop, iBrave,
AmaBrown and Indwangu, kanye no-Ashley Ardrey wezicathulo.
Izindonga zinikezela indawo ezungezile enezinketho ezinhle zokuthengisa futhi ngokujwayelekile inkundla yokudla ne-cinema multiplex ngaphakathi kwesikhungo, uma ingekho eduze. Uchwepheshe futhi mkhulu E-New Zealand izitolo zomnyango (iWarehouse, Abalimi, i-K'Mart), kanye namaketanga amakhulu ezitolo, banezela isikali - imindeni eminingi nentsha yenza izitolo ezinkulu lapho ziya khona esikoleni, ngezikhathi zasebusuku nangezimpelasonto.
Izitolo ezinkulu ezingaphansi komhlaba
ISt Lukeswas eyokuqala yezakhiwo ezinkulu ezakhiwa (i-1971) - manje isiyisakhiwo esikhulu sezitolo esenziwe kabusha futhi sandiswa eminyakeni edlule. Ihlala iyindawo ethandwa kakhulu emaphakathi kuze kufike emakethe. Izitolo ezinkulu ezimbili kanye ne-cinema muliplex.
I-277 Broadway (Newmarket) imfashini nezitolo zezitolo, inkantolo yokudla ngokubuka phansi iBroadway kanye nesuphamakethe. Izitolo eziseduzane kakhulu ezise-CBD - zitholakala kalula ngemoto, ngebhasi noma ngesitimela. Amahora amabili wokupaka wamahhala ngerisidi evela ezitolo.
ISylvia Park (yezitolo ezinkulu zaseNew Zealand) maphakathi nezitolo ezithengisa izinto ezinkulu. Isipiliyoni se-cinema ye-Luxury cinema ngesinye sezikrini ezinkulu kakhulu emhlabeni. Izitolo ezinkulu ezimbili. Indawo yokuhlala.
I-dress-Smartis enxanxathela yezitolo enakekela amagama anciphiswe ngokujulile. Sprawling ukudla enkantolo. Akunasuphamakethe noma kumabhayisikobho.
I-Auckland inezinketho eziningi zokukhetha zokudla ezibonisa ukuxubuka kwezinhlanga ezahlukahlukene.
I-Auckland ngokuvamile iyindawo ephephile ongayivakashela.
Futhi okufanele ukwenze e-Auckland, E-New Zealand
Iya ukunambitha iwayini eWaiheke Island. I-Waiheke iyikhaya kwezinye iwayini elimnandi futhi inamanye amabhishi amahle endaweni. Ungaxakwa phakathi nezimpelasonto, kepha kuthule kakhulu phakathi nesonto. Kubukeka kungumhlaba okude ne-Auckland, kodwa kuphela imizuzu ye-35 ngesikebhe.
Thatha isikebhe esiya eRangitoto Island. I-Rangitoto Island inemizila ezungeze iningi lalesi siqhingi, kanye nebhuloho elixhumeka esiqhingini saseMotutapu Island esingumakhelwane, futhi sihamba kakhulu kubahambi abangenalwazi kakhulu. I-Rangitoto Island inemihume eminingana ye-lava engaklabeka noma idlule kuyo njengoba inokubukwa kwe-360 degree enhle engqungqutheleni (okulingana ihora kuphela ukuhamba ngomzila oqondile). Lesi ngesinye seziqhingi ezilula kakhulu esiseduzane njengoba ingamaminithi we-20-25 kuphela ngesikebhe.
Endleleni yakho ngokusebenzisa i-Waitakere Ranges, iya emzaneni omncane osogwini wePiha futhi ulungele ubuhle bemvelo obumangalisayo.
Hlola i-Auckland futhiIzintambo zeHamilton nezikaHelomoomo zingakapheli amahora ambalwa ukushayela.